Noofambar 2013 | RayHaber | raillynews
Bisha: November 2013
3. biriijka xaraashka xaraashka weyn
buundada weyn ee buundada: Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Wadooyinka Turhan, Mashruuca Wadada Wadnaha ee Waqooyiga Marmara ee ku yaal xadka Yavuz Sultan Selim Bridge BID wuxuu qorsheynayaa inuu dardar galiyo dhamaadka sanadkan, ayuu yidhi. jidadka waaweyn [More ...]
Qalabka cirifka dheeriga ah ee Calli
Wadada lugta ee wadada Çallı: ANTALYA Dawlada Hoose ee Magaalada, waa mid jilicsan oo ku talagashay dhismaha wadada lugeynaya ee wadada tareenka ee sababay shilalka badan. Guul darradii labaad kadib Antalya Boulevard [More ...]
Goobaha Tareenka ee Khariidadaha Google iyo Madaarada: Google wuxuu sii wadaa inuu horumariyo khariidadaha Khariidadaha oo leh garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada tareenka. Khariidadaha Google ayaa sii kordhaya. Wadooyinka, dhaxdhaxaadinta, badaha badweynta hada [More ...]
Waxaan kufaraxsanahay oo waxaan helay 50 kun doolar
Wuxuu galay Marmaraya si uu wax u ogaado iyo 50 wuxuu helay kun doolar: Qofka galay Marmaray oo helay 50 kun oo doolar, wuxuu ku wareejiyay lacagtii milkiilaha. [More ...]
Shalay iyo Maanta in Tareenku High-Speed ​​Turkiga: Ankara-Konya iyo khadadka Eskişehir iyo Konya la shaqeeyo bilowday kadib markii bilowga duulimaadyada u dhexeeya riyo Turkey ee afartan sano in 13 ee tareenada-xawaaraha sare on March 2009 Ankara-Eskisehir. [More ...]
Kadriye mar kale waa la xaday
Kadriye wali si xun ayuu u ciyaarayaa: waa dad aad u liita oo rajeynaya inay ka faa'ideystaan ​​bagel… Marka xarunta tareenka ee Haydarpaşa ay ka dhamaatay adeegeedii, seddexdii geesiyaal ee bagel ee iibiya halkaas ayaa kursiga keydka u raraya meel kale. [More ...]
Aasaaska shabakad waddo-tareennada Kenya laga dhisi doono iyada oo lagu taageerayo Shiinaha: shabakad cusub oo tareenno laga dhisi doono gudaha Kenya iyada oo taageero dhaqaale laga helayo Shiinaha lana gaarsiinayo waddamada dariska ah ee Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. [More ...]
Xaraashka ugu horeeya ee loo yaqaan 'dolphin Bay' iyo astaamaha farsamada ee İZBAN: Dhameystirka shirkii ugu horreeyay ee tareenka cusub ee 40 ee loo yaqaan 'SubZMİR Suburban System (İZBAN)' ayaa loo dabbaaldegayay goynta keegga warshaddii Eurotem ee Adapazarı. Magaca '20' waxaa loo codeeyay biinka [More ...]
Kiiska Magaalada Izmir ee Magaalo Weyn ayaa mar kale dib loo dhigay: maxkamadaynta eedeysanaha 129, halkaas oo Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Aziz Kocaoglu lagu maxkamadeeyay eedeymo la xiriira burcadda, inuu sii socday. Izmir 8. EXPO 2020 waxay u codeysaa dhageysiga maxkamada Assize Court [More ...]
Waxay ahayd subaxdii oo ku taal Üsküdar Wake up
Aroortiina waxaa jiray Üsküdar Soo toosay hadda: George Marshall. Ninka sharafta leh wuxuu mar ahaa xoghayihii arrimaha dibadda Mareykanka. Iyagu waa Yuhuud. Wuxuu sameeyay dadaalo lagu bilaabayo wadahadalada ku saabsan aqoonsiga Israel. Waqtigani waa marki Marshall uu ahaa wasiirka Mareykanka. [More ...]
IETT Ring Expeditions ayaa bilaabatay magaalada Basaksehir
Socdaallada IETT ee loo yaqaan 'MetroET Baads' ee loogu talagalay Magaalada BaETakşehir ayaa bilaabmay: Duulimaadyada IETT ee ka kala imanaya gobollada kala duwan ee Başakşehir waxay bilaabeen Baska Baska-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Line. Khadadka IETT ee ka maqnaa shaqada Agaasimaha Guud ee IETT iyo qorshaynta kaabayaasha [More ...]
Nidaamka elektromagnetic ee Marmaray waa nadiif
Goobta korantada ee Marmaray waa nadiif: Mashruuca Qarniga Marmaray cabirkiisa elektiroonigga ah waa “nadiif”. Awoodda Teknolojiyada Isgaarsiinta Macluumaadka iyo Isgaarsiinta (BTK), 25 Bishii Noofembar 2013, tukaha qubeyska iyo [More ...]
Daryeelka gaarka ah ee taraamyada ee Eskisehir (Sawirka Sawirka)
Dayactirka khaaska ah ee taraamyada Eskişehir: Eskişehir, taraamyada tareenka fudud, oo ay ka doorbidayaan boqolaal kun oo qof gaadiidka magaalada bil kasta, waxaa diyaariya kooxda 30 habeen kasta oo diyaar u ah maalinta ku xigta. Sanadkii la soo dhaafay [More ...]